Izindaba - Ukuqoqwa Komkhiqizo we-TPU okubolayo
Ungahle uqaphele ukuthi kuyashisa futhi kuyashisa ehlobo, kubanda futhi kubanda ebusika. Ukuvikelwa kwemvelo kuyafuneka. Kanye nabantu esicelweni sokuvikelwa kwemvelo ephakeme nangaphezulu, ngokufanele, izinto ezingaboliseka ngokubolayo kungumkhuba. Ngaphandle kwalabaImisila yenkomo enobungani, iziqu ze-PLA ezibolayo, izindwani zokuphuza iphepha, amabhokisi okudla kwasemini kakolweni, i-coaster yamapulangwe nama-keychainsnjll., Izipho Ezicwebezelayo zingumhlinzeki ofanelekile wokunikeza umkhiqizo we-TPU owonakalayo kumakhasimende ethu. Ukunikela ngemizamo yethu elinganiselwe ekuvikeleni imvelo, futhi ndawonye ngomhlaba ongcono.
Izinto ze-TPU yizinto ezinobungani bemvelo ezingalulazeka. Iyaguquguquka, ihlala isikhathi eside futhi ayikwazi ukumelana nokungcola. Le nto ebolayo ingasetshenziswa emikhiqizweni yethu ehlukahlukene njengamalebula wokuthunga,odonsa basefrijini, amathegi ayisihluthulelo, amacala amafoni, i-screen wiper, izintelezi zefoni, omaki bemithwalo, abanikazi bamakhadi nokunye. Ngaphezu kwalokho, ungenza ngezifiso i-logo yakho. I-logo ehlukahlukene yokudala ingenziwa ku-TPU, njengokuphrinta kwesilika, ukuphrinta nge-offset, i-lenticular, glittering, glimmering, glitter liquid nokunye. Imikhiqizo yethu ye-Eco-Friendly TPU ilungele ukukhushulwa, ukukhangisa, ukuqoqwa, isipho, ukuletha izixazululo zokukhonjwa komkhiqizo njll. Imakethe yonke izohlaba umxhwele ezintweni zethu ezibolayo futhi ngomklamo wakho omuhle.
Amandla we-TPU: okubolayo, okuguquguqukayo, okuhlala isikhathi eside futhi okungavimbeli ukungcola
Amalogo ngokwezifiso: okucwebezelayo, okubenyezelayo, ukuphrinta kwe-lenticular, i-glitter liquid, ukuphrinta kwe-silkscreen, ukuphrinta kwe-offset njll.
Ukuba nentshisekelo futhi ufuna ukukhiqiza imikhiqizo ye-TPU nge-logo yakho yangokwezifiso yezenzo zakho ezilandelayo? Sicela ululeke leyo nto esitolo sethu esiku-inthanethi noma kukhathalogi ebanzi, usithumelele i-logo noma umklamo wakho kanye nemodeli nesitayela osikhethile. Sizokuthumelela imininingwane yamanani nesithombe sobufakazi esisuselwa kumklamo wakho nge-imeyili. Lapho usuvumile ubufakazi futhi wathumela inkokhelo, sizokwenza ngendlela oyifisayo idizayini yakho bese siyithumela kuwe.